« 48h de déclic »: tantsoroka ho an’ny tanora… | NewsMada
« 48h de déclic »: tantsoroka ho an’ny tanora…
Namolavola sehatra iray « 48 h de déclic » hanaovana tantsoroka ho an’ny tanora na olon-dehibe mila fanampiana ny La Résidence Amboara Tsifoina. Tanjona ny hanampy azy hahatsapa ny talentany na koa hahafantarany ny zavatra tiany atao amin’ny fiainana. Mijanona roa andro ao amin’ny Résidence ny olona ary raisin’ny tomponandraikitra an-tanana, mandritra izay fotoana izay. Olona fito (16 taona ny zandriny indrindra-40 taona no ho mihoatra) isaky ny 48 ora no raisin’ny coach. Indray mandeha ao anatin’ny iray volana ny fidirana ao amin’ny la Résidence. Tsy mety ny fiankinan-doha fa tokony ho fihaonana indroa ka hatramin’ny 12 no azo atao hanampiana olona iray, araka ny nambaran’ny filohan’ny federasiona malagasy misahana ny coaching professionnel, Ranoarivony Noussyh Seheno.
Efa mahazo vahana eto amintsika ny coaching, amin’izao fotoana izao, amin’ny sehatra samihafa : ny fandraisana mpiasa, ny olana eo amin’ny asa na fianakaviana… Fa ny tanora no tena liana aminy. Maro ireo mila tari-dalana ho an’ny latsaky ny 21 taona, eo koa ny saro-kenatra ka mila fiomanana sy fanampiana amin’ny sehatry ny asa ho an’ny efa bebe taona.
Misy ny sekoly manofana ho coach eto amintsika. Arakaraka ny tanjona ny faharetan’ny fiofanana. Herintaona ka hatramin’ny roa taona ny fanofanana ka matetika takina ny mari-pahaizana bakalorea sy ny fifehezana ny teny frantsay.